Eco Friendly Fiberfill ဖြစ်သည် မှအကောင်းဆုံး Eco Friendly Fiberfill ဖြစ်သည် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
PBS BIO မှ
Biodegradable Plastic Sheets များ
PLA သည် Biodegradable ဖြစ်သည်
Biodegradable Disposables များ
Eco Friendly Fiberfill ဖြစ်သည်
ကျနော်တို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူများမှာ Eco Friendly Fiberfill ဖြစ်သည် ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့စက်ရုံ Taiwanကျမတို့ကထုတ်ကုန်သစ်များဈေးကွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များအားအလျင်အမြန်တုံ့ပြန်ရန်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောစက်မှုဇုန်အသုံးပြုသူလောကီသားတို့၏အရေးအကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်အရည်အချင်းမြင့်မားသောနည်းပညာများ၏တင်းကျပ်သောကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင်နိုင်ငံတကာအဆင့်စံနှုန်းထုတ်လုပ်ပြီးစမ်းသပ်ပါတယ်။
သို့မဟုတ်ဖောက်သည်တစ်ဦးကအမိန့်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာကမ္ဘာတဝှမ်းအသစ် clients များနှင့်အတူအောင်မြင်သောစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုဖွဲ့စည်းရန်မျှော်လင့်နေကြသည်, ကျွန်တော်တို့ကိုကျုံ့အခမဲ့ခံစားကြည့်စေလိုပါသည်။
ပုံစံ - PLA Single use -09
၁၀၀%Biodegradable PLA staple fiber ထုတ်ကုန်-PLA filament ဖြည့်
PLA polylactic acid ၏အရင်းအမြစ်သည်အပင်ဖြစ်သည်,ပြောင်း (သို့) ပြောင်းဖူးမှ cellulose ကဲ့သို့,ကြံ,ဂျုံ,အာလူး,စသည်တို့.,၎င်းပစ္စည်းသည်ဇီဝဖြစ်ပျက်ရန်လွယ်ကူသည်.အပုပ်နှင့်မြေဆွေးပြီးနောက်,၎င်းကိုအပင်များအတွက်အာဟာရအရင်းအမြစ်အဖြစ်သုံးနိုင်သည်,စိုက်ပျိုးထားသောအပင်များကို PLA ၏ကုန်ကြမ်းအဖြစ်သုံးနိုင်သည်,ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနိမ့်ခြင်းနှင့်မြို့ပတ်ရထားစီးပွားရေးသဘောတရားများကိုအောင်မြင်စေရန်
100%biodegradable ပစ္စည်း,OKCOMPOST နိုင်ငံတကာစက်မှုမြေသြဇာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အီးယူအစားအစာတို့နှင့်အညီ-EU ထောက်ခံချက်အဆင့်.20/11
အရောင်:ဆေးဆိုးရန် PLA masterbatch ကိုထည့်နိုင်သည်
အချောထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းသည် ၀ ယ်သူအပေါ်မူတည်သည်’s ပုံဆွဲ,ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်မှိုနှင့်ဆေးထိုးသွင်းထုတ်လုပ်မှုကိုဖွင့်ရာတွင်ကူညီလိမ့်မည်.
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးမြေဆွေးပလတ်စတစ် PLA ထုတ်ကုန်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအား PLA ကုန်ကြမ်းများပေါင်းစပ်။ မှိုဖွံ့ဖြိုးစေရန်နှင့်အချောထည်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်ဆေးထိုးသည်.တစ်ခုပေါ့-ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒေါင်လိုက်ပေါင်းစည်းခြင်းအများစုသည် BIO ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ပြဿနာကိုမဆိုဖြေရှင်းရာတွင်ဖောက်သည်များအားကူညီနိုင်သည်.
အကောင်းဆုံး Eco Friendly Fiberfill ဖြစ်သည် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Eco Friendly Fiberfill ဖြစ်သည် ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
သို့: SHANG SHIEN CHENG INDUSTRY CO., LTD.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.pla-biodegradable.com/pla-yarn.html
PLA Non Woven အထည်
PLA Single use -04
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.pla-biodegradable.com/pla-non-woven-fabric.html
PLA Single use -03
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.pla-biodegradable.com/biodegradable-bristles.html
PLA Single use -05
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.pla-biodegradable.com/pla-tea-bag.html
Biodegradable 3D Printing
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.pla-biodegradable.com/pla-3d-printing.html
PLA Fiberfill	| Fibre De Rembourrage PLA	| PLA Faser Füllung	| Экологичный Fiberfill	| Fibra Ecológica	| Imbottitura In Fibra	| पर्यावरण के अनुकूल फाइबरफिल	| Relleno De Fibra	| Milieuvriendelijke Fiberfill	| ألياف صديقة للبيئة	| Fibrefill thân thiện với môi trường	| เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Fiberfill	| Fiberfill Ramah Lingkungan	| ファイバーフィル	| Çevre Dostu Elyaf Dolgusu	| PLA纖維